DEG-DEG: Afar loo heystay Shabaabnimo oo saaka lagu toogtay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG-DEG: Afar loo heystay Shabaabnimo oo saaka lagu toogtay Muqdisho
Mareeg.com: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saaka dil toogasho ah ku fulisay 4 nin oo horay loogu eedeeyey iney ka tirsan yihiin Alshabaab, laguna riday xukun dil ah.
Fagaaraha Iskuul Buluuziyo ee Magaalada Muqdisho, ayaa lagu toogtay xubnahaan ka tirsanaa Al-Shabaab ee maxkamada ciidamada qalabka sida horay u xukuntay.
Labo ka mid ah raga la toogtay waxaa horay maxkamadda ciidamadu sheegtay in lagu helay dil ay u geysteen askari ka tirsan ciidamada xooga dalka Soomaaliya.
Ninka 3-aad ee la toogtay ayaa ahaa wiil Computer uu watay ku qarxiyey gudaha hotelka Maka Almukarrama 8-dii bishii November 2013, halka ninka 4-aad ahaa wiil lagu soo qabtay qori hoobiye ah gudaha degmada bishii May ee lasoo dhaafay.
Gudoomiyaha maxkamadda darajada 1-aad ee ciidamada qalabka sida: Col. Libaan Yarow ayaa warbaahinta u aqriyey magacyada raga 4-ta ah ee la toogtay iyo kiisaska lagu helay.
“Saaka waxaa dil toogasho ah lagu fuliyey Caawiye Axmed Jaamac, 25 jir ah, oo ku dhashay Burco, kaasoo abaabulay qaraxii 8-dii November ee sanadkii tegay ka dhacay Hotelka Maka AlMukarama ayna ku dhinteen dad badan, ninkaas waxaa maxkamaddu dil ku xukuntay 7-7-2014” ayuu yiri Liibaan Yarow.
“Sidoo kale waxaa saaka la toogtay gacan ku dhiiglayaasha kala ah: Musdaf Maxamed Shidane iyo C/naasir Khaliif Maxmed oo labaduba ku dhashay Guriceel, waxey dileen Dable: Cabdi Maxamed Xuseen, waxeyna ka qaateen qorigii uu watay, waxaana maxkamadda darajada koowaad xukuntay 8-6-2014, halka maxkamadda sare isla xukunkaas ayiday 13-7-2014” ayuu sidoo kale yiri Liibaan Yarow.
“Waxaa kale oo la toogtay Nuur Cabdulle Cawaale oo ku dhashay Galgaduud, kaasoo 24-May lagu qabtay degmada Dayniile, isagoo heystay qori hoobiye 82 MM iyo 3 xabadood, kaasoo Alshabaab magaalada Muqdisho ku duqeyn jireen” ayuu hadalkiisa kusoo gebagebeeyey Liibaan Yarow.
Dhawaan ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya toogashu ku fulisay labo nin oo la sheegay iney ka tirsanaayeen Alshabaab, kuwaasoo lagu helay iney gabar ku dileen Muqdisho, sida maxkamaddu sheegtay.
Dilka 4-taan nin ee la sheegay iney ka tirsan yihiin Alshabaab ayaa lagu soo beegay xilli shalay Muqdisho lagu dilay Fanaanada xildhibaanka aheyd ee Saado Cali Wasrame, taasoo saaka meydkeeda lagu aasayo Muqdisho.
Xog: Saddex haween Soomaali ah oo laga qabtay Mareykanka & Holland